Coronavirus: Nin u dhintay dawo uu u liqay ka hortagga Covid-19 - Worldnews.com
Coronavirus: Nin u dhintay dawo uu u liqay ka hortagga Covid-19
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, wuxuu sheegay in dawada chloroquine ay suuragal tahay in lagu daweeyo
"Waxaan aragnay isagoo saxaafadda la hadlaya. Tahan ma ahayn xaqiiqdii,"
Coronavirus: Muxuu Trump ugu adkeysanayaa in Carona lagu daya dawada Maleeriyada?
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in dalka Mareykanka looga aqoonsaday daawada loo isticmaalo la dagaallanka duumada ama maleeriyada, lagu daweyn karo Coronavirus.Chloroquine...
BBC News 2020-03-21
Qaar ka mid ah bukaannada ayaa ka caafimaaday Covid-19, waxaana laga fasaxay cisbitaallada, balse mar labaad ayey xanuunsadeen, markii la baarayna waa laga helay. Fayraska...
Coronavirus: Mareykanku ma baarayaa dad ka badan kuwa ay baarto Kuuriyada Koonfureed?
Madaxweyne Donald Trump wuxuu difaacayay sida uu ula tacaalayo cudurka coronavirus ee saameeyay Mareykanka, xilli tirada dadka uu ku dhacayo ay aad usii badanayaan. Waxaan...
Coronavirus oo 'faraj' u furay kalluumaysatada Kenya
Guud ahaan qaaradda Afrika, fayraska Corona ayaa culays ku keenay dhinacyo badan oo dhaqaalaha ah, waxaana joogsaday inta badan ganacsiyada. Balse waxaa jira dad ka...
BBC News 2020-03-30
Coronavirus: Ma loo dhintaa fayraska Covid-19?
Lataliyeyaasha arrimaha seyniska ee Dowladda UK waxay aaminsan yihiin in fursadda ah in qof uu u dhinto fayraska corona ay u dhexeyso boqolkiiba 0.5 illaa 1. Taasi waa tiro aad uga hooseysa kiisaska dhimashada ee caalamka oo dhan la soo weriyay - Taas oo ah boqolkiiba 4% dunida oo dhan sida ay WHO sheegtay - Sababtoo ah dhammaan kiisaska la xaqiijiyay laguma ogaanin baaritaan...
Coronavirus: Mareykanka oo gargaar caafimmaad weydiistay dalalka caalamka
Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa kusoo warramay in xukuumadda madaxweyne Donald Trump ay baaq u jeedisay dalalka caalamka, kaas oo ah in ay la soo gaaraan ama ay ka iibiyaan qalab caafimaad oo muhiim u ah wax ka qabashada fayraska corona. Mareykanka ayaa doonaya in laga caawiyo qalab ay ka mid yihiin mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska ku dhago, dawada...
Trump oo isku meel dhigay Soomaaliya iyo Nigeria
Dolwadda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay ballaarinayso liiska waddamada ay ku soo rogtay xayiraadda dhanka socdaalka, waxaana haatan ay xayiraad ku soo rogtay waddamo lix ah, waxaana ka mid ah dalka Nigeria oo ah waddanka ugu dadka badan qaaradda Afrika. Muwaadiniinta waddamada Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Kyrgyzstan iyo Myanmar ayaa wixii haatan ka dambeeyo aan loo...
Waaxda maamulka warbaahinta ee shirkadda lagu magacaabo Ofcom ayaa dadka kula talisay inay ka fogaadaan isticmaalka qalabka cuntada lagu kululeysto ee microwave-ka, marka ay isticmaalayaan wifi-ga, tan oo qeyb ka ah talooyinka ku saabsan sare u qaadidda xawaaraha internet-ka. Arrintan ayaa ku soo aadeysa iyadoo malaayiin qof ay ka shaqeynayaan guryaha, oo qaarkoodna aysan...
Coronavirus: 150 Tuuniisiyiin ah oo warshad isku karantiilay si ay u sameeyaan walxaha afka lagu duubto
Shaqaalaha warshad ku taal waddanka Tuunis ayaa maalintiiba waxa ay soo saaraan 50,000 oo walxaha afka lagu duubta ah iyo qalab kale oo caafimaad kaddib markii ay doorteen inay goobtaas isku karantiilaan. 150 shaqaale ah oo u badan haween ayaa waxa ay muddo bil ah isku karantiileen warshad. Waxaa dhiirigaliyay wadaniyadooda xilli dalka uu la tacaalayo cudurka coronavirus, ayuu...
Amiir Harry iyo marwadiisa oo ka qaxay Canada, una guuray magaalada Los Angeles
Amiir Harry iyo marwadiisa oo ka qaxay Canada, una guuray magaalada Los Angeles Wararka ka imaanaya magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi isbuucii hore ay u soo guureen amiirka dalka Ingriiska Prins Harry (35), marwadiisa Meghan (38) iyo waliba wiilkooda yar Archie (11 bilood jir)....